Egwuregwu Meatballs Mac na Chiiz! - Ezi Ntụziaka
ihe iji pizza na-apụta
ọka na cob na crockpot
lasagna mpịakọta acha ọkụ na obi chiiz uzomme
mkpọ mkpọ eyed peas na ham
Egwuregwu Meatballs Mac na Chiiz!
Otu ihe ị kwesịrị ịma gbasara m bụ na m nwere ike ibi na macaroni na cheese. Kinddị ọ bụla ma ọlị, arụrụ n'ụlọ, oyi kpọnwụrụ, igbe bluu… ị kpọrọ ya, ahụrụ m ya n'anya! Ọ bụrụ na m mee ya n'ụlọ (nke dị ụkọ n'ihi na m na-eri ya niile) ma anyị nwere nri fọdụrụnụ, ebe m nọ na 8 nke ụtụtụ na friji na-eri ha.
apụl dumplings na apụl achịcha ndochi
Repin Mac & Chiiz nwere anụ Meatballs Ebe a
Ana m eje ozi mgbe mgbe Achịcha anụ ụlọ na a akụkụ nke macaroni na cheese na ụfọdụ salad… na ndị ọzọ ụbọchị ọ bịara m “Hey, Why not serve them together… like, really together !!!”. Ka m kwuo na nsonaazụ ya bụ ihe ọchị na-atọ ọchị!
1 iko osikapa akọrọ ole esi
Ejiri Meatballs ndị a na Mac & Chiiz jupụtara na cheese cheddar na ọgaranya velvety mac & cheese. Kpọrọ ihe, ọ dịghị mma karịa nke a! Ejiri m Nkeji 10 Stove Top Mac & Chiiz uzomme n'ihi na ọ dị oke ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe. Nwere ike iji typedị ụdị mac & cheese maka nke a ma ọ bụrụ na ị nọ na rush, lelee ntanye nri gị. Ha na-erekarị okpomọkụ ma na-eje ozi mac & cheese nke ga-arụ ọrụ zuru oke!
Ihe ị chọrọ maka uzommeputa a:
* Panko achịcha Mpekere * Anụ ehi akwọrọ akwọ * Mpempe akwụkwọ *
ihe na-eso ọkụkọ na dumplings
Ngwakọta bọọlụ Mac & Chiiz jupụtara
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri25 Nkeji Oge zuru ezu35 Nkeji Ọrụ10 bọọlụ Onye edemedeHolly Nilsson Otu ihe ị kwesịrị ịma gbasara m bụ na m nwere ike ibi na macaroni na cheese. Kinddị ọ bụla ma ọlị, arụrụ n'ụlọ, oyi, igbe bluu ... ị kpọrọ ya, ahụrụ m ya n'anya! Bipute Ntụtụ
▢1 ½ paụnd ata ata anụ
▢abụọ tablespoons yabasị finely belata
▢⅓ iko panko achicha achicha
▢½ iko grated cheese cheese
▢½ teaspoons ohuru ala ojii oji
▢1 ½ ounce cheddar bee n'ime obere cubes iri
▢1 iko kwadebe macaroni na cheese chilled (M ji nke a Ndenye stovu Top Mac & chiiz Ntụziaka)
▢abụọ tablespoons Anụ Mmịkpọ ihendori nhọrọ
Ikpokọta beef, yabasị, akwa, panko achicha achicha, shredded cheese na ose. Gwakọta naanị ruo mgbe agwakọtara (ịgwakọta ga-emepụta anụ anụ siri ike).
Kee anụ n’ime iri iri. Ghichaa anụ ọ bụla n'ime obere eriri. Elu na 1 obere ngaji nke macaroni (dika o nwere ike dabara) na 1 cheddar cube.
N'ogige atụrụ n'akụkụ elu pinching ka mechie na-aghọ a meatball. Tinye meatballs na parchment lined pan na ahịhịa na Anụ Mmịkpọ ihendori.
Ime minit 24-26 ma ọ bụ ruo etiti etiti anụ ọ bụla ruru eserese dị n'ime 160 Celsius.
Calorisị:Ogbe 275,Carbohydrates:12g,Protein:18g,Abụba:16g,Abụba Ajuju:6g,Cholesterol:73mg,Sodium:320mg,Potassium:Ogbe 268mg,Sugar:1g,Vitamin A:130IU,Vitamin C:Ugboro abụọmg,Calcium:119mg,Iron:2.1mg
Isiokwubọọlụ anụ N'ezieAgụụ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
* Ultra Creamy Mac & Chiiz * Meza bọọlụ juru na Mozzarella * Kabeeji Roll Casserole *